Xildhibaano maanta loo diiday inay u gudbaan xarunta golaha Shacabka | Jowhar Somali News Leader
Home WARARKA Xildhibaano maanta loo diiday inay u gudbaan xarunta golaha Shacabka
Xildhibaano maanta loo diiday inay u gudbaan xarunta golaha Shacabka
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacbka ayaa maanta loo diiday inay u gudbaan Xarunta Golaha Shacabka iyadoo ay ka hor-istaageen ciidamada Dowladda.
Xildhibaanada maanta loo diiday inay u gudbaan xarunta golaha shacabka ayaa waxaa kamid ahaa xildhibaan Mahad Salaad oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka isagoo loo diiday in uu ka soo gudbo isgoyska Zobbe.
Hase yeeshee,Xildhibaan Mahad Salaad oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in isaga oo marayey isgoyska KM5 qoryo lagu qabtay, markii uu isku sheegayna loogu jawaabay ‘agaasime ayaa celinay ee xildhibaan muxuu yahay”.
Xildhibaanka waxaa uu intaasi raaciyey in muran kadib uu mid ciidamadii ka mid ahaa uu qoray kula dhagay mid ka mid ahaa ilaalada xildhibaanka, kadibna ay xabado halkaasi ka dhaceen, intaas kadibna ay saraakiil ciidamada ah u yimaadeen.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka shir guddoominaya ayaa ciidamada ugu baaqay inay dhowraan xasaanada Xildhibaanada.Waxa uu ka codsaday guddiyada amniga iyo difaaca Golaha Shacabka inay baaritaan dhab ah ku sameeyaan ishor-istaaga maanta lagu sameeyay Xilhibaanada Golaha Shacabka.
Previous articleWasiirada Arrimaha Dibbada Itoobiya iyo Eritrea oo soo gaaray Muqdisho
Next articleMahad Salaad “Waa in Ciidamada ay dhowraan xasaanada Xildhibaanada”